Mifananidzo yekutanga Apple Watch prototype yakaburitswa. | IPhone nhau
Mifananidzo yekutanga Apple Watch prototype yakaburitswa
Toni Cortés | | Apple Watch, dzakawanda
Mimwe mifananidzo yakaburitswa ne yekutanga Apple Watch prototype, ine yako WatchOS beta firmware yakaiswa uye inoshanda zvizere. Kazhinji zvinhu zvese izvi zvinoparadzwa, kudzivirira kuburitsa kumakwikwi.
Hazvinyatso kujeka kana iwo mafoto akatorwa muzuva ravo, uye ipapo prototype yakaparadzwa, kana ichiri kushanda mudhirowa muApple Park. Neraki, iyo yekunze casing yakashanduka ikave yakakomberedzwa dhizaini yekutanga Apple Watch, nekuti iyi yakashata pamhuno. Kunyangwe vachiona Apple yazvino maitiro ekudzokera kumativi mativi....
Ivo vakangobudikira muaccount Apple Demo kubva kuTwitter mifananidzo mitsva inoratidza izvo zvinoita kunge prototype Apple Watch. Zvinogona kunge kuti mudziyo neimwe nzira wakapukunyuka kuparadzwa. Iyo ine yemukati software uye marongero ekushanda anoshanda zvizere.
Chigadzirwa chine kesi yechinyakare iri kure nekutaridzika kuri pachena kwewachi. Iyo Hardware inotangira iyo yazvino dijitari korona, iine chete mabhatani maviri kuruboshwe uye chinoratidzika senge bhatani repamba yakavakwa kumberi kwebhokisi.
Prototype Apple Watch ine Security Case inomhanya Yemukati Pre-WatchOS 1.0 inovaka, izere neyemukati yekuyedza maapplication uye ekuvandudza marongero. Zvinoshamisa kwazvo kuti chimwe chinhu chakadai chingadai chiripo; pasina kuparadzwa. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp
- Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020
Iyo software ndeye preview yeiyo yekutanga watchOS 1.0 uye Apple Demo inoratidza kuti chivakwa chemukati chiri kushanda zvizere, nemhando dzakasiyana dzemifananidzo dzinoratidza mushandisi interface ine akasiyana skrini.
Inoreva apple computer lisa kubva kuma1980. Kunyange Lisa Simpson anoshandiswa sechiratidzo chekushandisa muApple Watch prototype ye "Lisa Tester."
Apa ndipo zvakare paunogona kuona iyo "Springboard zoom" application, iyo inosanganisira yekudyidzana chiitiko cheicho iyo watchOS chidzitiro chemusha kuti tese tinoziva.
Pasina kupokana, chinhu chemuteresi icho chingave chakanyatso mutengo kwazvo mune zvakajairika maNorth America misika yemhando dzakasiyana dzeApple. Ivo zvirokwazvo vaizobhadhara mafuro eiyo smartwatch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mifananidzo yekutanga Apple Watch prototype yakaburitswa
Maitiro ekugovana internet kubatana kubva ku iPhone neIOS 14
India inosimbisa Apple ine mutoro wemari inotyisa pane chero chigadzirwa chekugadzira